tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-26
GPS, rafitra fametrahana toerana manerantany, mandray soa betsaka amin'ny fiainana andavanandro. Ny malalanao sy ny anao dia tsy ho very amin'ny GPS. Ny singa fanarahana GPS dia fitaovana fitetezana amin'ny ankapobeny amin'ny olona, ​​biby, fiara na entana izay azo apetraka amin'ny toerana na hetsika. Ireo mpanara-maso GPS dia ireo ...
Te hamboly zavatra anaty trano ve ianao? Ny fitomboan'ny zava-maniry dia mila zavatra telo: ny tany, ny rano ary ny tara-masoandro. Mora kokoa ny tany sy ny rano, fa ny fanomezana masoandro kosa dia manome fanamby. Mety ho sarotra ny manome hazavana ampy ho an'ny mpikarakara tokantranonao noho ny fiovan'ny vanim-potoana na ny tsy fisian'ny varavarankely. Eva ...
Fanadiovan-drivotra / sterilisera vaovao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-13
Hatramin'ny faran'ny taona 2019 dia tsikaritra ny COVID-19, niely eran'izao tontolo izao izy io, ary nihahery vaika kokoa, nitaona fitaomana tampoka, fikorontanana, fahafatesan'olona, ​​arabe foana, festival, orinasa mihidy, sekoly mihidy, firenena nakatona. Miady amin'ny viriosy izao tontolo izao, saingy mandra-p ...
Mitombo Ligh, Mitombo Lightin, Mamboly hazavana, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo ny avotra, Jiro zavamaniry,